Ekpere maka amara ka ị na-agagharị na ndụ
"Ihe ọ bụla ị na-eme, rụọ ọrụ sitere n'obi, dị ka maka Onyenwe anyị na ọ bụghị maka mmadụ". - Ndị Kọlọsi 3:23
M chetara afọ ole na ole gara aga mgbe m kuziri ụmụ m ịkwọ ụgbọala. Ikwu okwu banyere irighiri akwara! N’ịnọdụ ala n’oche ndị njem, ọ dị m ka enweghị m enyemaka. Naanị ihe m nwere ike ime bụ inye ha nduzi ma kwe ka ha soro ya. Na mgbe ha malitere ịnya ụgbọ ala nanị ha, echeghị m na m hiri ụra ruo ọtụtụ ụbọchị!
Ugbu a, a bịa n’ịkụziri ụmụaka ịkwọ ụgbọala, ị nwere ike ime ya n’ụzọ abụọ. Nwere ike ịmalite site n’igosi ha ihe enyemaka mbụ, map, kaadị mkpuchi, na ebe ị ga-etinye Starbucks mgbe ụgbọ ala na-aga. Ma ọ bụ (ụzọ kachasị mma), ị nwere ike ịhapụ ha ịmalite ịkwọ ụgbọala ma gosi ha ihe ha ga-eme n'ụzọ.
Chineke chọrọ ka anyị mata ka esi eduzi ndụ. Otu ụzọ ọ gaara esi kụziere anyị bụ ịgwa anyị ihe anyị ga-eme banyere ihe ọ bụla nwere ike ịdapụta. Ihe niile anyị ga - eme bụ iburu ntuziaka gị n’isi ma anyị ga - adị mma.
Mana otu esi eduga, Chineke maara ụzọ kachasị mma iji mụta bụ ịpụ gaa hụ ndụ n'onwe gị, na-eje ije site na Mmụọ Nsọ ma na-ege ya ntị ka anyị na-aga. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ irite uru kachasị na ndụ, bie ndụ dị ka ndị a na-enye ọzụzụ. Kwe ka Mmụọ Nsọ duzie nzọụkwụ gị, ị ga-amụta otu esi eme nke ọma n'akụkụ niile nke ndụ!
Ezigbo Onye nwe anyị, kwe ka anyị were ahụmịhe ọ bụla anyị nwere ma jiri ya mee ihe dị mma na njem a nke ndụ. Kụziere anyị inwe amamihe na iji amamihe a mee ihe maka ebube gị. Kụziere anyị ịgbalịsi ike n’ihe niile anyị na-eme. Ka omume anyị bụrụ ihe ziri ezi oge niile ka obi anyị nwee ike ịnabata olu gị. Amen
Nke gara aga Post Gara aga post:Archdiocese Katọlik nke Vienna na-ahụ uto nke ndị seminarian
Next Post → Post ozo:Ozioma nke taa dị ka Nọvemba 22, 2020 na okwu Pope Francis